Maka: ilizwi | Martech Zone
I-Leger Metrics: Ilizwi loMthengi (i-VoC) yokuSebenza ngokuNika ingxelo
NgoMvulo, Matshi 31, 2014 Douglas Karr
I-Leger Metrics ibonelela ngeqonga lokuncedisa inkampani yakho ekuqondeni ngcono indlela amava akho abathengi aqhuba ngayo ukoneliseka, ukuthembeka kunye neenzuzo kwinkampani yakho yonke. Iqonga leLizwi loMthengi (i-VoC) likubonelela ngezixhobo eziyimfuneko ukuze ubambe ingxelo yomthengi ngezi zinto zilandelayo: Ingxelo yoMthengi-Mema ingxelo yabathengi kwaye uyiqokelele ngeselula, iwebhu, iSMS kunye nomnxeba. Ukunika ingxelo kunye nohlalutyo-Hambisa ukuqonda kubantu abalungileyo, ngexesha elifanelekileyo
NgoLwesibini, Januwari 21, 2014 NgoLwesibini, Januwari 21, 2014 Douglas Karr
I-UserZoom ibonelela ngokusisiseko kwilifu, konke-in-one iqonga lesoftware yomsebenzisi ekhompyutheni yokuvavanya ukusetyenziswa ngokukuko, ukulinganisa ilizwi lomthengi kunye nokuhambisa amava amakhulu abathengi. I-UserZoom ibonelela ngophando kubuchule kwidesktop, kubandakanya ukuvavanywa kokusebenziseka okukude, ukuhlelwa kwamakhadi, ukuvavanywa komthi, uvavanyo lokucofa umfanekiso-skrini, uvavanyo lwexesha lokuphela, uvavanyo lwe-Intanethi, i-VOC (Intercept Surveys), VOC (Ingxelo yeNgxelo) kunye nokuvavanywa kokusebenziseka kweselfowuni kunye nesoftware VOIC (Thintela). Iziphumo zophando zedatha yokusebenziseka, iimpendulo zophando,
NgoLwesine, Septemba 12, 2013 NgoLwesine, Meyi 7, 2015 Douglas Karr
Ilizwi loMthengi (VoC) kukuqonda okuhlangeneyo kwiimfuno zabathengi, iimfuno, ukuqonda, kunye nokukhethwa okufunyanwa ngokubuza ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo. Ngelixa uhlalutyo lwewebhu yesiko lusixelela okwenziwa lundwendwe kwindawo yakho, uhlalutyo lweVoC luphendula KUTHENI abathengi bethatha amanyathelo abawenzayo kwi-intanethi. I-iPerceptions liqonga lophando elisebenzayo elisebenzisa ukubamba itekhnoloji kwiindawo ezininzi zokuchukumisa, kubandakanya idesktop, iselfowuni kunye nethebhulethi. I-iPerceptions inceda iinkampani ukuba ziyile, ziqokelele, zidibanise kwaye zihlalutye iVoC yazo